Hantida Ganacsiga ee Forex FXCC
Qalabka Ganacsi ee Forex
Home / Trading / Qalabka Forex
Hayso qalabka saxda ah ee gacanta si aad u qabato shaqada
At FXCC waxaan ku dhajinnay dherer wayn si aan u diyaarino qalab wax ku ool ah oo fara badan oo qalab ganacsi ah. Waxaanu la tashannay khubarada; dibadda, guriga iyo ka sii muhiimsanaa khubarada ugu muhiimsan - macaamiisheena, si ay u bixiyaan liiskan dhamaystiran, kaas oo ku dari doona macaamiisheena 'armor' marka ganacsiga suuqyada laga iibsado.
Khayraadka waxbarasho ee muhiimka ah waxay ku jiri doonaan waxyaabo badan oo dheer oo macaamiishu ay baran doonaan marka laga reebo qaar ka mid ah horumarka cusub. Shuruudaha aasaasiga ah ee ganacsatada qibrada leh; jadwalka dhaqaalaha, waxaa lagu daraa dariiqa ugu dambeeya; tiknoolajiyadaha ganacsiga gaarka ah ee FX. Si kastaba ha noqotee, iyadoo la adeegsanayo jadwalka dib loo eegay tusaale ahaan, waxay muujineysaa heerka daryeelka iyo faahfaahinta aan soo galnay, si aan macaamiisheena u siino ilaha ugu wanaagsan ee la heli karo.
Waxaan ku qanacsanahay in qalabyadani ay bixin doonaan fursadda macaamiisheena si ay u horumariyaan xirfadahooda, sidaa darteedna ku raaxaystaan ​​waayo-aragnimo ganacsi oo guuleysta. Qalab waliba waxaa loo xushay inuu yeesho sifooyin gaar ah si uu u bixiyo faa'iidooyin gaar ah.
Dhibaatada maal-galiyaha ganacsiga ugu muhiimsan maalgashadayaasha iyo ganacsatada waa in ay sii wadaan miiskooda, ama si joogto ah ugu furfuraan tab ee kumbuyuutarkooda. Kalandarka dhaqaale ee FXCC ayaa hadda loo diyaarin karaa in ay ku habboonaato rabitaanka saxda ah ee ganacsadaha.
Ogaanshaha meesha ay ku badan yihiin ganacsatada FX waxay ku caddeyn karaan inay noqdaan kuwo qiimo leh marka ay gaarayaan go'aano ku saabsan jihada lacagta ee lacagta.
Tilmaamahan xasaasiga ah, oo ku saleysan sanado badan oo xogta la isu geeyay, ayaa ganacsatada u oggolaanaya daaqad ganacsi ee caalamka.
Iyadoo saacadaha suuqa ay badanaaba isbeddelayaan, tusaale ahaan, natiijada xilliga xagaaga ee Ingiriiska, waa lagama maarmaan in ganacsatadu ay heegan u yihiin wakhtiyada dhabta ah, sida New York, oo furan.
Heerarka Kharashka Bangiga Dhexe
Go'aanka qiimaha saldhigga dhexe ee bangiga ayaa la daabacay ganacsatada waa in ay ka warqabaan qiimaha asaasiga ah ee caalamka, gaar ahaan bangiyada dhexe ee mas'uul ka ah lacagaha waaweyn sida; USD, GBP, EUR, YEN.
Falanqaynta suuq-geynta FX ayaa soo gashay laba nooc oo kala duwan; farsamada iyo falanqaynta aasaasiga ah Ganacsadayaashu waxay shaqaaleyn karaan isku-dhafan labada labbo, si ay u sameeyaan go'aano ganacsi oo fara badan
Haysashada munaasabadaha wararka iyo warbixinnada warbaahintu waa arrin muhiim ah oo ganacsiga guuleysta. Si kastaba ha ahaatee, jebinta wararka, falanqaynta farsamooyinka, falanqaynta aasaasiga ah iyo fikradda ayaa sidoo kale bixisa aragti muhiim ah halka laga yaabo in suuqyada ay u socdaan
U fiirso wakhtiga dhabta ah ee xigashada ECN, shabakada elektaroonigga ah ee loo habeeyey, in si toos ah loo marayo habka loo xareeyo amarada. Iskudhafanaanta faahfaahsan ee faafitaanka, isku duubnaanta natiijada dhaqdhaqaaqa FX, waxay hubisaa in macaamiisha FXCC la siiyay sicirka runta ah, suuqyada ugu wanaagsan ee la heli karo 24 / 5.
Kala xisaabiyeyaasheena waxay bixiyaan adeeg qiimo leh "diyaar garow leh". Haddii aad ubaahan tahay: xisaabinta cabbirka booska, dib u qaabee marxaladda aad u baahan tahay, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso cabbirka badan ee ku haboon, ka dibna tirsigaa xisaabiyayaashu way ku caawinayaan.